Cape Mentelle Shiraz 2016 ~ ICT.com.mm
HomeCape Mentelle Shiraz 2016
Shiraz Alcohol: 14% Dry/ 2016 Margaret River/ Australia ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Cape Mentelle အမှတ်တံဆိပ် Shiraz 2016 ဝိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဩစတြေးလျနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း Margaret မြစ်အနီးမှာရှိတဲ့ အကောင်းဆုံးဝိုင်စပျစ်ခင်းတွေကနေ ချက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး Alcohol ပါဝင်မှု 14% ရှိတဲ့အတွက် အနည်းငယ်ပြင်းရှတဲ့ ဝိုင်နီအရသာကို ခံစားရမှာပါ။ Dry/ 2016 ဝိုင်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး... [Learn more]
Margaret River/ Australia
ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Cape Mentelle အမှတ်တံဆိပ် Shiraz 2016 ဝိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဩစတြေးလျနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း Margaret မြစ်အနီးမှာရှိတဲ့ အကောင်းဆုံးဝိုင်စပျစ်ခင်းတွေကနေ ချက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး Alcohol ပါဝင်မှု 14% ရှိတဲ့အတွက် အနည်းငယ်ပြင်းရှတဲ့ ဝိုင်နီအရသာကို ခံစားရမှာပါ။ Dry/ 2016 ဝိုင်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး မီးကင်ထားတဲ့ ခရမ်းသီး၊ ကျောက်ဖရုံသီး၊ ငရုတ်ပွ စသည့် အသီးအရွက်ဟင်းလျာများ၊ နွားကလေးသား/အမဲသားကင်၊ မှိုကင် စတဲ့ အစားအသောက်တွေနဲ့ လုံးဝလိုက်ဖက်တဲ့ ဝိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Deep dark magenta with garnet edge. Spicy and floral notes on the nose qith aroma of wild black cherry, violets and intense smoked peppercorns. Rich and juicy on the palate, chewy or silky tainnin withagreat and fine texture.
Smoked or grilled vegetables dishes such as eggplant, zucchini or red capsicum, grilled veal or beef with truffle or mushroom are the best selections to pair with this Shiraz from Margaret river.